Apple Inc nidaamka kaydinta iCloud u isticmaala iDevice in uu kaydiyo xogta digital iyo goobaha. The user id tufaax helo kaydinta free 5GB haddii users loo baahan yahay cusboonaynta kartaa kaydinta by bixinta fiiga bil kasta. Arrinta muhiimka ah ee nidaamka iCloud kaydinta waa in ay dib u soo ceshano xogta tirtirayaa iyo goobaha. Xogta iyo goobaha yihiin xoojiyaa kaydinta iCloud aan xidhiidhinaya computer shakhsi. Ayaa gurmad habka dhacaya maalin si ku salaysan maalintaas waa marka qalab uu saaran yahay il awoodeed oo qufulan la xiriir internet firfircoon. Haddii qalabka kulan eedaynaysaa wax ku saabsan khasaaraha ka mid ah xogta iyo goobaha ay macquul tahay in nidaamka si iCloud iyo dhamaan xogta loo baahan yahay in la taageeray kartaa.
Hayaan Access via iCloud.com
Waxaa jira siyaabo badan oo dadka isticmaala iCloud heli karaan xogta xoojiyaa. Mid ka mid ah habka caadiga ah waa, si ay u helaan website-ka iCloud. Gal website iCloud la ID tufaax Magaca adeegsadaha iyo password. https://www.icloud.com/ . Users waxay heli karaan macluumaadka qaarkood ee website-ka.
Faa'iido: Jidka xaqiijistay oo ah helitaanka xogta shakhsiga.
Qasaarooyinka: Habkani xaddidaya helitaanka si kala duwan ee xogta. Maktabadda Photo, qoraalo, xiriirada, goobaha yihiin xogta aasaasiga ah user a heli karaa website-ka iCloud. Su'aashu waxay weli, waxa ku filan? Maxay ku saabsan xogta kale oo muhiim ah kaydiyaa iDevice sida WhatsApp ku lifaaqan, il sawir ama wac taariikhda? Users heli doonaa adag si ay u helaan xogta lagu kaydiyaa digital iyo goobaha la isticmaalayo habkan.
Access iCloud gurmad via iCloud Control Panel
Habka labaad waa in ay helaan ama u maamuli iCloud taageeray xogta waa in la soo dajiyo iCloud Control Panel.
Software waa download rasmiga ah website Apple .
Marka la rakibo la dhamaystiro user saxiixi karaan in la ID tufaax Magaca adeegsadaha iyo password
Markaas waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan gurmad iCloud sida sawirka hoos ku qoran.
Faa'iido: Jidka Apple oo ah helitaanka xogta iyo goobaha.
Qasaarooyinka: Xogta in lagala soo bixi karo ayaa ku koobnayn photos, videos, iwm Waxaa la Dullayn kartaa users koobna in ay helaan xog gaar ah ugu.
Access iCloud gurmad via Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Waxaa cad in habka kor ku xusan ma bixisaa gacanta ku badan xogta xoojiyaa. Si kale haddii loo dhigo, aadan awoodin in ay helaan dhammaan xogta ama waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah xogta gaarka ah aad u baahan tahay. Waa xaalad aad arrin adag u user a. Sidaas halkan waxaan ku soo bandhigo hab kale si ay u helaan xogta gurmad iCloud aan la dhaafi karin, kuwaas oo kaa caawin badbaadiyo macluumaadka aad u baahan tahay in computer ama u celinaynaa in aad iDevice.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka waa xirfad macruufka software kabashada xogta. Waxa kale oo aad ka helaysaa hab fudud oo ay ku helaan files ku xoojiyaa in iCloud. Waxa ay taageertaa in ka badan 16 nooc oo ay ka mid yihiin file Xiriirada, Messages, Photos, Messages WhatsApp, iwm
Download version Trial Free ka badhamada hoose.
Step1 Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad kala soo baxdo Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) on your computer ka walxood Download kor ku xusan.
Step2 Dooro habka soo kabashada
Ka dib markii socda Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, doortaan kabsado iCloud hab File kaabta iyo geli macluumaadkaaga account iCloud si ay u gasho.
Step3 Download iCloud kaabta
Markaad gasho, dooro file iCloud gurmad aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado xogta laga guji Download in ay marka hore download it.
Markaas waxaad dooran kartaa noocyada file aad rabto inuu ka soo kabsado, kaas oo kaa caawin doona inaad badbaadin waqti aad u dejisan iyo iskaan xog dhab ahaan aad aan u baahnayn.
Step4 Kulanka Xiisaha iyo badbaadin xogta aad u baahan tahay si aad u computer.
Kadib markii geedi socodka scan la dhammeeyo, waxaan dooran kartaa nooca xogta aan u baahanahay oo hore ku eegaan. Waxa ay taageertaa in ku dhawaad ​​ku eegaan oo dhan nooca xogta aad qabto in iCloud ah. Hubi xogta aad u baahan tahay oo guji Ladnaansho badbaadin xogta si aad u computer.
Faa'iido: Users dooran kartaa xogta gaarka ah inuu ka soo kabsado iyo badbaadin in kombiyuutarka.
Taageerada ku dhowaad dhammaan noocyada xogta dadka isticmaala caadi ah u baahan tahay.
Taageerada in la soo celiyo Xiriirada ah, Messages, Notes in qalab si toos ah.
Simple iyo ammaan.
Qasaarooyinka: Ma Free. Version Maxkamad ku siiyaan baaritaan lacag la'aan ah iyo Kulanka Xiisaha Leh ee xogta.
> Resource > iCloud > Saddex Siyaabaha Download kaabta iCloud Si fudud.